स्थानिय भन्छन टावरको सट्टा शिक्षा र स्वास्थमा लगानी गर – Satabdi News
होमपेज / मुख्य समाचार / स्थानिय भन्छन टावरको सट्टा शिक्षा र स्वास्थमा लगानी गर
स्थानिय भन्छन टावरको सट्टा शिक्षा र स्वास्थमा लगानी गर
झापा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा २५ तले ‘भ्यु–टावर’ निर्माण सुरु भएको छ । संघीय सरकारअन्तर्गतको सघन सहरी विकास तथा भवन आयोजना कार्यालयले १ अर्ब ५४ करोड १४ लाख ३९ हजार १ सय ६४ रुपैयाँमा ठेक्का लगाएर दमक नगरपालिका–३ दापगाछीमा टावर निर्माण अघि बढाएको हो । ठेक्का चीनको जेटसीजीआईईसी र नेपालको आशिष, ओम साइराम जेभी ललितपुरले संयुक्त रूपमा पाएका छन् ।
दमक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकुल श्रेष्ठले टावर बनाउनुको प्रयोजन आमनगरवासीलाई थाहा नभएको बताए । ‘भ्यु–टावर कस्तो बन्छ ? कसले किन बनाउँदै गरेको हो ? नगरवासीलाई केही जानकारी छैन,’ उनले भने ।
राप्रपाका नेता राम थापाले भ्यु–टावरबारे आफूलाई पर्याप्त जानकारी नभएको बताए । सम्बद्ध निकायले सरोकारवालासँग छलफल नगरेको उनको भनाइ छ ।
दमक नगरपालिकाका मेयर रोमनाथ ओलीले भ्यु–टावर निर्माणमा कुनै समस्या नरहेको बताए । नगरभित्र अस्पताल, मेडिकल कलेज निर्माण गर्नुपर्नेलगायत धारणा आए पनि भ्यु–टावर पनि महत्त्वपूर्ण भएको उनले तर्क गरे ।
‘अरू आयोजना पनि विस्तारै बन्छन् । भ्यु–टावर नगरको एउटा चिनारी बन्नेछ,’ उनले भने, ‘यसबाट नगरको विकासमा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।’
दमक ३ का वडाध्यक्ष नवीन बरालले भ्यु–टावर निर्माणले उत्साही बनेको बताए । ‘टावर निर्माण सुरु भएकामा एकदमै खुसी छौं,’ उनले भने, ‘यति ठूलो र अत्याधुनिक निर्माण हाम्रा लागि एउटा सपना थियो । त्यो सपना पूरा हुने क्रममा छ ।’ निर्माण समयमै सकिनेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनले बताए । टावर हेर्नका लागि मात्र नभई व्यावसायिक थलोसमेत बन्ने भएकाले दमकको समग्र विकासमा यसले टेवा पुर्‍याउने उनले दाबी गरे । दमक नगरपालिकाले भ्यु–टावर निर्माण स्थालमा नयाँ सहर बसाल्ने अवधारणा पनि अघि सारेको छ ।
टावर आसपास क्षेत्रमा पर्यटकीय सहर स्थापना गर्न नगरपालिकाले जग्गाधनीहरूसँग छलफल गरिरहेको वडाध्यक्ष बरालले जानकारी दिए । ‘पहिलो चरणमा कम्तीमा १० बिघामा नयाँ सहर बसाउने गरी छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने । नगरपालिकाले टावर निर्माणस्थलको ५ सय मिटर वरिपरि जग्गा किनबेच गर्न रोक लगाएको छ ।
You have reacted on "स्थानिय भन्छन टावरको सट्टा शिक्षा र स्वास्थमा ल..." A few seconds ago